Mbola tsy tonga ny fahavaratra dia efa dibo-drano sahady ireto mponina eto amin’ny fokontany Ankorondrano Andrefana ireto, amin’izao fotoana izao.
Fanafarana tsy ara-dalana: Finday maro no nopotehina
Finday tsy ara-dalàna maherin’ny arivo isa no nopotehina teny Alarobia ny 01 Aogositra 2019, taorian’ny fanamarinana izay natao nohon’ny tsy fananana ny kaody IMEI.
Araka ny didim-pitondrana laharana 890/2018 nivoaka ny volana janoary 2018 dia tsy azo atao intsony ny mampiditra finday tsy manara-dalàna, izany hoe finday tsy manana kaody IMEI eto Madagasikara ary tsy azo ampiasaina amin’ny tambanjotra ihany koa izany nanomboka ny 30 jona 2019 ho fampiarana ny lalàna.
Tsenan’Anosibe : Naaton’ny prefektioran’Antananarivo ny fananganana tsena
Naato ny fanamboaran’ny kaomina tsena eo amin’ny toby fiantsonan’ny fiara eo amin’ny tsenan’Anosibe, ho fitandroana ny filaminam-bahoaka. Nanome 48 ora ny kaomina ny mpivarotra handravana io fananganana tsena vaovao io.
TSENA MAY TAO TOAMASINA
Tsena 1200 amin’ny 1700 no may ny afo ny sabotsy teo tao bazarikely Toamasina,
Naharitra andiny 3 eo ny faharetany afo, ary potika nivadika lavenona avokoa ny 80% ny tsena,
Raha ny 70 % ireo nametraka entana tao aminy tsena kosa dia tsy nisy noraisina na ny tapa-panjaitra iray.
Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana. Fifaliana niarahan’ny Malagasy rehetra ny fitsenana ny Barean’i Madagasikara ny sabotsy teo, saingy nisy ihany koa ny fahamaizana teny andravoahangy nandritra izany fotoana izany. Labozia tsy voavono no nitarika ny afo raha ny nambaran’ny nanatri-maso.